Aqoon kororsi xeerka iibka Qaranka ku saabsan oo Muqdisho laga furey – Radio Muqdisho
Aqoon kororsi xeerka iibka Qaranka ku saabsan oo Muqdisho laga furey
Aqoon kororsigan ay ka qeyb galayaan xubnaha gudiga maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa lagu baranayaa iibka qaranka iyo suuq geynta iyadoo ay bixinayaan khubaro ajnabi ah oo ka socda bankiga aduunka.
Aqoon kororsigan oo mudo laba maalin ah socon doona ayaa ka qeyb galayaashu waxa ay ku baran doonan habka ugu wanaagsan ee iibka iyo hab maamulkiisa iyadoo loo marayo hababka ugu wanaagsan ee caalamka.
Xildhibaan Cilmi Maxamuud Nuur oo ka mid ah Gudiga Maaliyadda ee Baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay Warbaahinta ayaa sharaxay aqoon kororsigan iyo muhiimadda uu Dalka u leeyahay.
“Aqoon kororsigan waxaa jooga xubno ka socda wasaarada maaliyada waxaana bixinaya khubaro arimaha iibka aqoon u leh ,si wax looga fahmo mowduucaas oo dalka u baahanyahay sharcigiisana uu baarlamaanka hor yaalo in wax laga bartana waa muhiim si uu dalka u anfaco taasina waxa y hagi kartaa nidaamka qandaraasyada iyo iibka qaranka ,maku ekaan doono beri iyo maanta aad ayaana loogu baahanyahay”. ayuu yiri Xildhibaanku.
Siminaarka oo qeyb ka ah qorshaha gudiga maaliyada ee baarlamaanka soomaaliya ee ku aadan horumarinta hanaanka maaliyadeed ee dalka ayaa lagu wadaa in maalinta beri ah lasoo gaba gabeeyo.
Tartan Isboorti oo ku saabsan isdhexgal bulsho oo ka furmay degmada Shangaani
Howlgalo Ciidanka ay ka sameeyeen deegaanka Muqa-Kori